Foxconn ayaa dib u furtay warshadeeda India ka dib markii Apple "ciqaab" | waxaan ka imid mac
Foxconn waxay dib u furtay warshadeeda Hindiya ka dib 'ciqaabta' Apple
Apple waxa ay doonaysaa in ay wax yar ku tiirsanaato Shiinaha, wax yarna waxa ay “la talisaa” alaab-qeybiyeyaasheeda in ay furaan warshado cusub oo wax soo saar ah oo laga sameeyo waddamo kale, sida Hindiya. Foxconn, mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee Apple, oo kaashanaya dawladda Hindiya, ayaa ka furtay dalkaas warshado cusub, laakiin waxay dhibaato aad u weyn kala kulmeen xaaladaha caafimaad ee shaqaalahooda.
Dawladda Hindiya waxay ballan qaaday inay dhisto oo ay dayactirto qolalka hurdada iyo qolalka cuntada ee ay ku jiraan kumanaanka shaqaalaha ah ee warshadda Foxconn. Laakin caajiska ah xaaladaha caafimaad hoygaas, oo si fagaare ah loo cambaareeyay bil ka hor, ayaa ka cadhaysiisay Apple ilaa heer ay ku qasabtay Foxconn inay xidho warshadda ilaa dhibaatada la xalinayo. Waxay u muuqataa in ciqaabtu dhaqan gashay.
Foxconn waxa ay India ku ururinaysay iPhone 12 muddo dheer, waxana ay hadda tijaabinaysay noocyadii ugu dambeeyay ee iPhone-ka. iPhone 13. Laakiin Apple ayaa go’aansatay inay si degdeg ah u joojiso wax soo saarka warshadda dalkaas, sababo la xidhiidha dhibaatooyinka caafimaad ee ay sheegeen shaqaalaha warshaddaas.
Bishii hore, wakaaladda Reuters dhajiyay a warbixin halkaas oo uu ku sharaxay xaaladaha nadaafadda darro ee shaqaalaha Foxconn ay ku nool yihiin Hindiya. Waxay ku cidhiidhiyeen xeryo cidhiidhi ah, qolal lagu cunteeyo oo ay ku jiraan cuntooyin dhacay, qaarna sagxadda jiifa, qolalkaas oo u dhexeeya lix ilaa soddon qof.
Ku dhawaad ​​300 oo shaqaale ah ayaa sakhraansan
Taariikhahaas, 259 shaqaale ah ayaa soo gaaray a khamriga raashinkii xumaaday. Markii warku soo baxay, Apple waxay si degdeg ah ugu khasabtay Foxconn inay xidho warshadda ilaa dhammaan xaaladaha murugada leh ee shaqaalaha warshadda la hagaajiyo. Warshad ka kooban 17.000 oo shaqaale ah.
El dawlad Hindiya, oo mas'uul ka ah dhismaha guryaha shaqaalahan, ayaa hore u qaaday tallaabo waxayna u socotaa inay dhisto guryo cusub oo la seexdo. Waxa lagu qiyaasaa in ay qaadan doonto laba ama saddex bilood in dhammaan shaqaalaha la dejiyo xarun cusub.
Waqtigan xaadirka ah, wax soo saarku wuxuu bilaabmayaa mar labaad usbuuca soo socda iyada oo ay ka badan yihiin boqol shaqaale. Oo waxaas oo dhan hoos kormeerka Tufaax, si aanay taasi mar kale u dhicin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Foxconn waxay dib u furtay warshadeeda Hindiya ka dib 'ciqaabta' Apple
Podcast 13 × 16: Waxa aan ka fileyno Apple sanadka 2022
Apple waxay sii deysay Shazam kordhinta Chrome iyo Microsoft Edge